Xasan Gurguurte oo difaacay in dawladdiisu aaney NGO aheyn.
nInkan jaasuuska ah waa khaa'in waa in layska qabtaa shariif biijo isagaa ka daran	February 06, 2013
yaahu iska ooya xassan shiekh jir oo joog cadowgaana hakaa hooseeyo waa madaxweyne si wanagsan oo cad loosoo doortay una qalma inuu hogamiyo umada 22yrs halaga kusoo jirtay hadana khawarijtu dhibeyso	February 06, 2013
Walaahay allaah ayaa iga hadlinaye NGO iyo wax kadaran ba way tahay	February 06, 2013
Qofka sh. Muxamed sheganaya waxana kuhadlaya waxan kulenahay sheikh nimada hacebayn kha'inyow ado kale ayaa ummada rogaye	February 06, 2013
To:sh.muxamed waxan ku shegaya sheekh munafiqiinta inaad tahay marka nin asagaba munafaq ah siduu dad muwaxid ah khawarij ugu tilmama wlh waa wax qariib ah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! February 06, 2013
Asc walaalayaal waxan idin xasusin lahaa in aflagaada la iska daayo, sida shurrucda ku cad	February 06, 2013
Waawareey murtadkaan muxuu cadowtooyo weyn u qabaa muslimiinta,shariif biijo kanaaba ka daran. Murtadkaan waa in aan si dag daga u qabanaa	February 06, 2013